🥇 ▷ Sida loo isticmaalo bartaada si loo kordhiyo iibka bulshada ✅
Sida loo isticmaalo bartaada si loo kordhiyo iibka bulshada
Maxaad samaynaysaa si taas looga gudbo? Kaliya maahan inaad raadiso wado ku dhis cadaymo bulsho, samee qiimeyn soo jeedin, dalab iyo U oggolow akhristayaasha in sheygaagu u qalmolaakiin waa inaad sidoo kale U samee qaab aan rabshad lahayn, oo aan jahwareerin dadka, waxayna kuu shaqaysaa 24 saacadood maalintii..
Muuqataa wax aan macquul aheyn, miyaanay ahayn? Khalad
Qodobkaan, fikradda ayaa lagu soo bandhigay. U adeegso balooggaaga sida bogga iibka.
Ka tag qashinka rootiga ah: isbarasho
Blog-gaagu waa muusiggaaga tusmada, laakiin wuxuu sidoo kale bixiyaa wax intaa ka badan. Waxay u shaqeysaa sidii wakiil iib ah oo qarsoon waxayna diyaar u tahay inay suuq geyso.
Markaad wax iibiso Ha isku dayin inaad ku khasabto dhammaan faahfaahinta ku taal hal bog iibsi, Ku dhaji Blog ama emayl. Maxaa loo qaadan waayey Socodka JeffMiyaad fikrad ka qaadeysaa bogga iibka bogga (hal mar emayl kasta) oo aad ku dabaqdaa blog-gaaga?
Runtii way fududahay… Qeex waxa ay tahay inuu blog kaaga sameeyo. U kala-qaybi qaybaha oo u beddela qeybahaan dariiqooyinka blogWaxaad u adeegsan kartaa hal baal goolal kasta ama waqtigaaga ayaad ku bixi kartaa kuna shaqeyn kartaa bil kasta.
Sida ugu fiican, dhajinta ma aha inay ahaato nidaam, maadaama dadku aan loo dammaanad qaadi karin inay u aqriyaan nidaamkaas. Markii loo soo bandhigo si aan kala sooc lahayn, ma abuurto digniin. Waxaad dhagaystayaashaada diiradda saartay oo aad diiradda saartay halka aad ugu baahan tahay.
Adigoo si tartiib ah u qabanaya Jidkaaga u samee maskaxdaada akhristayaashaadigoon qasbin soo galitaankaaga.
# 1: Soo bandhig
Hada, ku dheji aasaaska. Muxuu bixiyaa (taasi waa, waa maxay badeecadaadu), immisa ayey ku kacaysaa maxaase kujira?
Haddii aad horey u qoratay blogging, waa inaad weli ka hadashaa alaabooyinkaaga. Haddii aadan sameynin, u isticmaal blog-gaaga qaab aad tan u sameyso. Qeex isla markaana sharax waxa aad bixiso.
Ma waa badeecad jireed ama dijital ah? Miyaan soo dejisan karaa Sidee ayey u egtahay marka aad albaabkayga timaadid?
Qeybtani waxay la xiriirtaa khibrad. U adeegso qoraallada noocaas ah si aad uga caawiso aqristayaashaada inay u sawiraan mas’uuliyadda wax soo saarka
Xitaa haddii aadan u baahnayn inaad sheegto sicirka (waa inay horey u ahaan jirtay meel boggaaga iibka ama gaariga wax gadashada), waad awoodaa. Sheeg qodobbada la xiriira qiimaha.Tusaale ahaan, sida badeecadaadu u barbar dhigto kuwa kula tartamaya, sida ay muhiim ugu yihiin waxyaabaha aad ka kooban tahay waxay ka dhigan tahay qiimaha badeecadaada, iyo sababta qiimaha badeecadaadu ay uga badan tahay mid ka muuqata sumadda qiimaha.
Wax soo saarkaagu maahan wax uun baaro, waa xirmo ama xirmo, miyaanay ahayn? Kaliya maahan shey dhijital ah, waa nidaam… koorso dhameystiran.
Tani sidoo kale waa wakhti ku habboon oo wax laga qabto. Ka hadal cusboonaysiinta, noocyo cusub (oo ku habboon barnaamijyada software), noocyada tijaabinta iyo horumarinnada iyo wixii isbeddel ah ee aad ku sameyso safkaaga. Soo bandhig alaab cusub sida ay iyagu yihiin. Abuur xafladaha goynta jeexjeexyada. Ku dar dhadhan yar iyo dhir udgoon. Dadka dhibaataysan!
37signals waxay leedahay barta sheyga, oo si istiraatiiji ah u soo bandhigeysa badeecadeeda iyada oo aan laga sarreynin dusha sare.
Eeg sida 37 astaamood u sameeyaan.
Ujeeddada halkan ma aha in la bilaabo, laakiin waa in si faahfaahsan loogu daabacaa deeqdaada si aad markiiba u saxdo diidmadaas. Akhristayaashu waxay iibsadaan oo keliya markay ogaadaan sida saxda ah ee ay helaan. Marka yaanay u dhicin inay ahaato
Miyaad aragtaa wicitaanka waxqabadka dhamaadka maqaalka? Tani waxay toos u toosin doontaa bogga iibkaaga.
# 2: Abuur qiimo
Dabcan, haddii aad rabto inaad ka dhigto akhristaha inuu noqdo iibsade, waa inaad ku qancisaa inay badeecadaadu qiimo leeyihiin. Wuxuu dardar geliyay nus shaqadiisa dalabkiisa haatanna waa inuu ka shaqeeyaa sidii looga gudbi lahaa diidmada qaar.
Halkan waxaad ku qurxin kartaa wax yar. Qor qodobada ku saabsan sababta aysan macaamiishaadu u noolaan karin la’aantiina badeecadaada. Sii tusaalayaal dadka aan istcimaalin laakiin runtii ka faa’iidi kara.
Ku kobci awoodaada iyada oo loo marayo daabacaado wargelin ah iyo Ka hadal baahida loo qabo adeegyadooda.Tusaale ahaan, iskood u shaqeystayaashu waxay abuuraan baahiyo iyagoo sameeya tabarucyo faahfaahsan oo lagu hagaajinayo naqshadeynta, hagaajinta koobiga, ama la abuuro codsi ka fiican. Khabiirada suuq geynta ee internetka ayaa tan sameeya iyagoo kahadlaya waxa dhici kara haddii ay raacaan nidaamkaaga.
Shirkadaha adeega khadka tooska ah sida 37 Calaamadaha Calaamadaha ayaa isdhaafsada macluumaadka “warshadaha” guriga waxayna abuuraan kaliya kuwa raacsan kaliya laakiin sidoo kale falsafad ku xeeran waxsoosaarkooda. Waxyaabaha jireed ayaa xitaa ka sii sahlan… Midabkii hore “ka hor” iyo “ka dib” ayaa ka muuqda xayeysiista miisaanka.
Fikradda waad heshay
Xor baad tahay Kudar wicitaan ficil dhamaadka qoraalkanHadaadan farta ku fiiqin bogga iibinta, dooro ikhtiyaar ikhtiyaar ah (ku sii wad fikradda boggaan).
mar labaad Halkan waxaad uga hadlaysaa falsafada.
Ma tahay mid dabiici ah, sahlan in la isticmaalo, murugsan, hufan, khibrad leh, iwm? Maxaa ka dhigaya inay meheraddaadu shaqeyso, sidee bay tani u saameynaysaa baaxaddaada wax soosaarka maxaase ay tahay inay iyagu kaaga soo iibsadaan ee aysan ka iibsan kuwa kula tartamaya? Waxaad si sahal ah ugu qori kartaa daraasiin qoraal ah oo kaliya mowduucyadan.
# 3: Adeegso caddeyn bulsho
Caddaynta bulshada waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee matoorrada iibka. Muhiim ma ahan, laakiin waxay fududeyneysaa shaqadaada. Sidoo kale waa wax ay tahay inaad markasta sameyso maxaa yeelay waxay abuuraysaa dhaqan hareeraha alaabadaada aad ayeyna ugu xoogantahay dhaqanka suuqa maanta.
Shahaadooyinka qoran waa hagaagsan yihiin. Waxaad tahay bilow. Dadka badankood runti ma rumeeyaan iyaga, laakiin waxay jecel yihiin inay arkaan. Haddii aad haysato, ku dhaji baloogyadaada barta meel fudud oo muuqata. Haddii aadan mid haysan, hel.
Markhaatiyada fiidiyowga ayaa xitaa ka sii fiican maxaa yeelay waxaan arki karnaa wajiga. Waxay ku dhowdahay inay noqoto mid dhab ah. Waxaan doorbida marag-kacyada adag iyo kuwa aan dhammaystirnayn, maxaa yeelay aan ka hor tagno, haddii ay yihiin kuwo aad loo ilaaliyo, waxaa loo arkaa inay yihiin warbaahinta habeenkii. Qofna uma malaynayo inay run yihiin, sax?
Intaa waxaa sii dheer, wareysiyada sidoo kale si fiican ayey u shaqeeyaan. Xaqiiqdii, wareysiga macaamiisha ayaa ah hab wanaagsan oo iftiinka loo soo bandhigo. Ayaa aan dooneyn inuu ku jiro baloogyada ay ku jiraan barta ay ku taallo ee ay jecel yihiin?
Labada maqal iyo muuqaalba si fiican ayey u shaqeeyaan, laakiin isku saameyn ma leh.
Xeelad kale ayaa ah U samee sawirrada macaamiishaada ama xitaa macaamiisha ka sii fiican iyada oo alaabtaadu gacanta ku haysoTani waa caddeynta ugu badan ee bulshada ee aad heli karto.
Sidaan wada ognahay, tweets-ka ayaa si weyn waxtar ugu leh muujinta caddeynta bulshada. Waxay fiicnaan laheyd marka qof walba uu ka hadlo, sax?
Tweetizen waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhexgasho durdurrada sida TwitStat.usBarnaamijyadan ayaa si istiraatiiji ah waxay ku yaalliin baloog ama bogga iibka waxayna u dhaqmayaan sidii qalab magaalada ah oo badeecadaada ah. Waxay furan yihiin 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii.